हदै भो लापर्बाही
टेकुको सरूवा रोग अस्पतालमा उपचाररतमध्ये कुनै एकमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखियो । तर, यो खबर अस्पताल र सम्बद्ध स्वास्थ्यकर्मीले थाहा पाएनन् । २४ घण्टापछि पत्रपत्रिका र स्वास्थ्यमन्त्रीको विज्ञप्तिबाट थाहा पाए । ल्याबले अस्पताललाई दिनुपर्ने रिपोर्ट मिडिया र मन्त्रीलाई दियो । त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी कुन अवस्थामा कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । उल्टै स्वास्थ्यमन्त्रीले सूचनामा एकद्वार प्रणाली अपनाएको दाबी गर्छन् । हाँस उठ्दो कुरा त उनले यसलाई चेन अफ कमान्ड भने । उनलाई के कुरा गम्भीर विषय हो भन्ने समेत थाहा रहेनछ । यस्ता स्वाथ्यमन्त्रीको कमान्डमा कोरोनाविरुद्ध कसरी लड्न सकिएला ?
अरू कसैले सूचना दिनुभन्दा अगाडि नै आफैले दिने होडमा उनले गलत सूचना दिए । कुन बिरामीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो भन्ने सम्ममा अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई थाहा नदिँदा त्यहाँ हल्लीखल्ली नै मच्चियो । यसबाट स्वास्थ्यमन्त्रीको क्षमता र संवेदनशीलता माथि प्रश्न उठेको छ । देशलाई आपत्ति परेका बेला भनेर कसैले विरोध नगर्नु एउटा कुरा हो । तर, यस्तो गम्भीर लापर्बाही गर्नुचाहिँ अक्षम्य गल्ती हो ।
कोरोना राष्ट्रिय सङ्कट हो र यस विरुद्धको लडाइँमा अग्रपंक्तिमा स्वास्थ्यकर्मी छन् । तर, उनीहरूलाई पीपीईलगायत सुरक्षा उपकरण दिइएको छैन । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी नै जोखिममा पर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । भारतको दिल्लीमा एक जना डाक्टरबाट ८ सय जना संक्रमित भएको आशंकामा सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । नेपालको अवस्था के छ कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
हो, यस्तो संक्रमणविरुद्ध लड्ने क्षमता नेपालको छैन । तर, लापर्बाही हुन त भएन नि । एउटै मन्त्रीले दुई तीनओटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अनि मिटिङमा नै समय बिताउनुपर्ने भएपछि तिनले काम गर्न नसक्नु स्वाभाविकै हो । तर, काम गर्न नसके पनि भएभरको जिम्मेवारी बोक्ने मन्त्रीहरूलाई
के भन्नु ?
बालाजुहाइट, बालाजु, काठमाडौं ।